Mobile ekwentị ikpe n'ihi na iphone 7 ikpe mmịfe na 7 plus, obere akpa nnọchi N'ihi iPhone 7 kaadị ikpe dabara abụọ kaadị
Tụkwasịnụ Ikike: 10000 Ibe kwa ụbọchị
Ịkwụ Ụgwọ Okwu: T / T PayPal
OEM iml abụọ Pita film ekwentị ikpe
IML Product Description na Njirimara:
Ihe: PITA film + TPU, PC, PC + ABS
IML nwere ike na-aghọta na ọtụtụ iche iche nke technology, Agba ga-agbanwe ihe dị mfe na onye iji.
All ihe bụ mbubata si Flo Rida feat Germany.
IML technology nwere ihe ndị magburu onwe mmetụta eguzogide.
Ụkpụrụ n'ime ekwentị ikpe nwere ike na-a ogologo oge mgbe ịjụ oyi.
More technology oke maka ekwentị ikpe. N'ihi na ákwà, akpụkpọ anụ, achara, osisi, flash ike, wdg
OEM na ODM dị anyị.
1.10years IML technology emeputa. Anyị nwere magburu onwe R & D ngalaba. Anyị pụrụ ime ka ebu dị ka gị chọrọ.
2.More asọmpi factory price iji hụ asịwo si uru.
3.Professional PD & QA ngalaba nwere ike ime ka n'aka obere nnyefe oge na iwu siri ike akara àgwà maka ngwaahịa.
4.Complete ngalaba si Ime ebu ka mbukota. All nke nzọụkwụ ga-abụ ụlọrụ nọọrọ onwe ẹkụre site anyị ụlọ ọrụ.
1.High quality: Kwa eserese ga-agabiga siri abụọ inyocha.
2.Best nnyefe oge: Ga-akara anyị emeputa kpamkpam
3.Competitive price: All price ga-ukara, ekpe ikpe site engineering ngalaba.
4.OEM imewe: 10years ahụmahụ OEM & ODM emeputa
HXS Ltd, IML / IMD technology rụpụta ndú!
Gịnị bụ IML?
IML (In-akpụzi Label) bụ ọhụrụ ekwentị ikpe technology na ígwè obibi akwụkwọ ụkpụrụ na PITA film na ogwu ogbugba.
IML bụ upgrade mbipụta IMD (In-akpụzi Ịchọ Mma)
Ị a emeputa ma ọ bụ trading ụlọ ọrụ?
Anyị bụ ndị ọkachamara IML emeputa na-elekwasị anya IML technology maka 10 afọ ahụmahụ. Site Nkedowanya ka Printing, akpụ, Ọgwụ, Nnyocha, mbukota. All nke nzọụkwụ ga-ezu site anyị emeputa.
Gịnị ka ị na-emepụta maka?
Anyị bụ ndị isi na-emepụta ihe IML usoro ngwaahịa. Tinyere IML ekwentị ikpe, IML ekwentị panel, IML digital panel, IML smart watch panel.IML ike akụ panel, IML saa igwe panel, IML electric kwuru panel, wdg
Nwere ike ị na-enye ndị OEM ozi?
Anyị bụ ndị ọkachamara OEM emeputa maka afọ iri IML technology ụlọ ọrụ.
Biko ziga gị chọrọ imewe ịbịaru faịlụ na anyị na-eme ka ebu gị.
Olee otú anyị pụrụ isi nweta samples?
N'ihi na anyị ugbu a samples ga-free maka anyị ahịa na chọrọ ebi akwụkwọ samples ga mkpa iji kwụọ ụgwọ.
Olee banyere gị nnyefe oge?
2-3days maka samples na 3-5days maka iji. The nnukwu ibu ga-dị ka gị ibu.
Ihe ngosị kefòto:
Previous: IMD electroplated yi tpu + pc ekwentị ikpe n'ihi Iphone usoro
Osote: ọhụrụ mbata onwe ebu OEM akpụkpọ anụ ekwentị ikpe n'ihi Iphone usoro
Ekwentị Ngwa N'ihi Iphone7
Ekwentị Case 7
Ekwentị Case N'ihi Iphone 7 Plus
Ekwentị Case Iphone 7
Ekwentị Case Iphone 7 Plus